Bit By Bit - agba nwere - 4.6 Ndụmọdụ
Ma ị na-eme ihe n'onwe gị ma ọ bụ na-arụ ọrụ na onye gị na ya na-arụkọ ọrụ, achọrọ m ịnye ndụmọdụ ndụmọdụ anọ m chọtara karịsịa aka na ọrụ m. Akụkụ abụọ nke ndụmọdụ abụọ metụtara ndụmọdụ ọ bụla, ebe nke abụọ abụrụ ihe dị mkpa karị maka nyocha nke afọ-azụ.
Ihe mbụ m nyere ndụmọdụ maka mgbe ị na-eme nnyocha bụ na ị kwesịrị iche echiche dị ka o kwere tupu e nweta data ọ bụla. Nke a yiri ka o doro anya na ndị na-eme nchọpụta na-agba mbọ ịnweta ihe, ma ọ dị ezigbo mkpa nye ndị na-arụ ọrụ na nnukwu ihe ọmụma data (lee isi 2). Site na ndị dị otú ahụ ọtụtụ n'ime ọrụ na-eme mgbe ị nwere data, ma ule bụ ndị na-abụghị: ọtụtụ n'ime ọrụ ga-eme tupu ị na-anakọta data. Otu n'ime ụzọ kachasị mma ị ga-esi jiri onwe gị chee echiche nke ọma tupu ị nakọta data bụ ịmepụta ma debanye aha atụmatụ nyocha maka nyocha gị nke ị kọwapụtara n'ụzọ doro anya nyocha ị ga - eme (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) .
Nke abụọ m ndụmọdụ ndụmọdụ zuru oke bụ na ọ dịghị otu ule ga-ezu oke, na, n'ihi nke a, ị ga-atụle ịmepụta usoro nyocha nke na-ewusi ibe gị ike. Anụla m nke a dịka atụmatụ nke armada ; kama ị na-agba mbọ ịkwalite nnukwu ụgbọ agha, ị kwesịrị ị na-arụ ọtụtụ ụgbọ mmiri dị ntakịrị na-enye aka. Ihe omumu nke omumu omumu a bu ihe omumu na ihe omumu, ma ha adighi ike n'ebe ozo. Ọ dabara na, ọnụ ala nke ụfọdụ nchọpụta dijitalụ na-eme ka ọtụtụ nyocha mmụta dị mfe.
N'iburu n'ozuzu a, M ga-achọ ịnye ndụmọdụ abụọ dị mkpa maka ịmepụta afọ ole na ole nyocha: mepụta data efu efu (nkebi nke 4.6.1) ma wuo ụkpụrụ omume n'ime atụmatụ gị (ngalaba 4.6.2).